Faah-faahin ku saabsan dagaalkii Tukaraq maanta oo khamiis ah dib uga curtay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Faah-faahin ku saabsan dagaalkii Tukaraq maanta oo khamiis ah dib uga curtay
Faah-faahin ku saabsan dagaalkii Tukaraq maanta oo khamiis ah dib uga curtay
Dagaal aad u culus ayaa maanta ka dhacay aaga Tukaraq kaas oo u dhexeeya ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland oo 15 bishan Maajo ku dagaalamey aaga Tukaraq.
Dagaalka ayaa ka duwan kii maalintii hore waxaana uu si siman uga socdey saddex aag oo kala ah dhanka Dhoodida ee Tukaraq uga beegan dhanka Waqooyi, Dhanka Buundada Tukaraq oo uga beegan Bariga iyo Laba Madaxley oo dhanka Hawdka uga beegan Tukaraq una dhaxaysa Tukaraq iyo Boocame.
Isla subaxnimadii hore ayaa ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland ku kala baxeen labada aag ee midna dhaco Waqooyiga ee dhoodida iyo dhanka hawdka ee laba Madaxley, waxaana u suurta gashey in ciidamadii Puntland ee halkaas ka dagaalamay ay guulo ka gaaraan dagaalka qabsadaana aagagii ay fadhiyeen ciidamada Somaliland, ciidamada Somaliland ayaa u soo baxay dhanka Laamiga waxaana ay awoodoodi oo dhan isugu geeyeen dhanka Buundada ee bariga Tukaraq, ciidamada Puntland ee ka diriray dhanka bariga ama Buundada ayaan hormar weyn sameyn, waxaana ay horey u socdeen oo keliya qiyaastii 10km.
Goobaha Lagu dagaalmay
Ciidamad Puntland ee guusha ka soo hoyey labada aag ee dhoodida iyo Laba madaxley ayaan horey u socon, waxaana muuqata in ciidamada Puntland ay garbo siman ku socdaan.
Wasiirka Warfaafinta Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa warfidiyeenada kula hadley gudaha magaalada Garoowe, waxaana uu sheegay dhanka laamiga in ay 10km dib u riixeen ciidamada Somaliland, khasaaro badana gaarsiiyeen.
Khasaaraha rasmiga ah ee labada dhinac ayaan la xaqiijin karin. Askar ka tirsan Somaliland oo ku dhaawacmey dagaalka ayaa la gaarsiiyey isbitaalka magaalada Laascaanood, sidoo kale dhaawacyo kale ayaa loo gudbiyey magaalooyinka Oog iyo Burco waxaana muuqata in Somaliland dhaawaceeda ay u qaybisey laba magaalo. Dhanka Garoowe waxaa isbitaalka la keenay ciidamo ku so dhaawacmey dagaalka tiradooda saxda ah lama oga, waxaana albaabka Isbitaalka laga ceshey dad doonaayey in ay booqdaan oo u badnaa ehelada.
Dagaalka oo bilowdey subaxnimadii hore ee maanta saacaddu markey ahayd 05:00 subaxnimo ayaa ayaa istaagey goordhaweyd, waxaana rasaas goos-goos ah laga maqlayaa dhanka Buundada Tukaraq.
Somaliland iyo Puntland midba midka kale ayuu ku eedeeyey in uu dagaalka saakey bilaabey.